ံHardDisk Killer တဲ့ — MYSTERY ZILLION
ံHardDisk Killer တဲ့
စိတ်ချရတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက warning message တစ်ခု၀င်လာပါတယ်။ အရင်းတိုင်းပဲ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ မကြုံဖူးသေးပါ။ သတိထားကြဖို့ပါ။
If someone by the name "opera.tun" wants to add you to their list dont accept it . Itsavirus . Tell everyone on your list because if somebody on your list adds them you will get it too. It isahard drive killer andavery horrible virus. Please pass this on to everyone on your list
ခုလိုသတိပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်ပါသလဲ?
ကျွှန်တော့်ဆီ၀င်တာကတော့ နှစ်ခုတောင်.... :d
1.do not add alfred hundana on your ym list: If someone by the name of alfred hundana (dragon_heart620) wants to add you to their list, don't accept it. It'savirus. Tell everyone on your list because if somebody on your list adds them you will get it, too. It isahard drive killer andavery horrible virus. Please pass this on to everyone on your list. We need to find out who is using this account. Sorry for the inconvenience. Right click on your group name of your buddy list and click send message to all.
2.if u get ( "nyan " hello "life is beauty" ) mail , don't open it!
It's better to delete that mail .. Very dangerous cos he will be stole your password and he can modify your password.
ဘာသဘောလဲဟ.... တကယ်လား... တမင်တစ်ယောက်ယောက်ကလုပ်နေတာလား.. တခုခုပဲ.. :39:
Thankalot Ko Tweety:)
I haven't meet ..........:O:O
ကို Tweety ပြောထားတဲ့ message တော့ မနေ့က GTalk မှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ လှမ်းပြီးသတိပေးလိုက်တာပဲ။ ကိုမိုးမြင့်ရှိန်ပြောတာကိုတော့ မတွေ့မိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် သတိတော့ထားရမယ်။ အခုလိုသတိပေးတဲ့ ကို Tweety ကိုရော ကိုမိုးမြင့်ရှိန်ရော
Thanks !! Bro !!
I will pass that information to my friends. :101:
အခုလို သတိပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.......
ကာကွယ်မှု အတွက်က ကော ဘယ်လိုများဆောင်ရွက် ရ မလဲ ဆိုတာ လေး တော့ သိချင်ပါတယ်.....
B!GK0M wrote: »
ရော် ~ခက်ပီ ကိုတီကြီး ရေးတာ ရှောင်ရန် ပါပြီးသားလေ
ကျေးဇူးပါပဲ ကို Tweety ရေ။ ကျွန်တော်ကတော့မကြုံဖူးသေးဘူး။ \_:D/
Hi NLA What special for you and me
Harddick killer is it possible
Do send me please (not virous) the usefull software